Jamie Carragher oo ku booriyay kooxda Liverpool inay dib ula soo saxiixato Philippe Coutinho – Gool FM
(Liverpool) 18 Maajo 2019. Kabtankii hore ee kooxda Liverpool, Jamie Carragher ayaa ku booriyey Reds inay soo qaataan oo ay dib ugala soo saxiixdaan kooxda Barcelona ciyaaryahan Philippe Coutinho suuqa kala xiddigaha ee xagaagan.
Coutinho ayaa ka tagay garoonka Anfield oo ku biiray Barca bishii Janaayo ee sanadkii 2018, laakiin waxa uu ku dhibtooday inuu qaab ciyaareedkiisa ugu fiican ku muujiyo dalka Spain.
Waxaa jira warar dhowr ah oo soo jeedinaya in kooxda ku guuleysatay horyaalka La Liga ay diyaar u tahay inay khasaaro oo ay qiimo dhimis ku sameyso ciyaaryahan si uu ugu biiro kooxdii uu doono.
Carragher ayaa u sheegay kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jurgen Klopp inay u baahan yihiin inay la soo saxiixdaan xiddiga xulka qaranka Brazil ee Coutinho, kaasoo ay sidoo kale doonayaan kooxo kala duwan.
“Ma oran karo gacanta ayaan ku soo dhigayaa isaga, laakiin haddii ay jirto suurto-galnimada in dib loo soo celiyo Coutinho waa in qiimaha la dhimaa, Barcelona sidoo kale waa inay xoogaa dhintaa khasaareheeda, kaddib waan sameyn doonnaa.” ayuu Jamie Carragher u sheegay Liverpool Echo.
“Markale ma la soo dhoweyn doonaa haddii uu soo laabto?, taasi ma hubo, laakiin waa inuu isku dayaa, ciyaaryahan nuucaasi ah safkeenna wuu ka dhiman yahay, waxaan haysannaa Adam Lallana iyo Xherdan Shaqiri, laakiin kani waa laacib heer ahaan ka duwan.”
“Waa waxa keliya ee Man City ay na dheer tahay, waxay haystaan Bernardo Silva, David Silva iyo Kevin De Bruyne, annagu ma haysanno xiddigo ceynkaasi ah, ciyaartooy sare oo khad dhexe ah waan heysannaa, balse waa inaan xoogaa ka duwan ku soo darnaa, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka horreeya inaan qiimo wanaagsan ku helno.” ayuu Carragher ku soo xiray hadalkiisa.
Coutinho ayaa dhaliyey 54 gool waxaana uu caawiyey 45 gool oo kale 201 kulan oo uu u saftay kooxda Liverpool ka hor inta uusan u dhaqaaqin dalka Spain.